Ukugqitywa komphezulu-iPandawill Technology Co, Ltd.
Ukufezekisa eyona ndibano intle yokusebenza, kufuneka sitshatise eyona nto ifanelekileyo yokuthengisa nesicelo sakho kunye nenkqubo yendibano.
Ukwenzela ukwanelisa yonke indibaniselwano yeprofayili yendibano, ukusetyenziswa kwezinto kunye neemfuno zesicelo, sinikezela ngolu luhlu lubanzi lokugqitywa kokuthengiswa njengeenkqubo zangaphakathi endlwini:
✓I-HASL ekhokelwa ngokwesiko
✓Ukuntywiliselwa kwegolide ngaphezulu kweNickel (ENIG), kubandakanya igolide enzima
✓I-OSP (i-Organic Solderability Preservative)
✓Umnwe weGolide, ukuPrintwa kweCarbon, i-Pe /ible S / M.
✓Imaski yeSolder: luhlaza, bhlowu, bomvu, mnyama, tyheli, mhlophe ziyafumaneka
✓Isikrini sesilika: mhlophe, luhlaza okwesibhakabhaka, bomvu, tyheli, mnyama, luhlaza ziyafumaneka
Siyavuya ukukucebisa ngesona sigqibo silungileyo esisekwe kwinani lezinto kubandakanya ubomi beshelfini, ukunikezela ingqalelo, ubume bomhlaba, indibano evulekileyo yeefestile phakathi kweenkqubo kunye neendleko ngokucacileyo.
Zonke iibhodi ezibonelelweyo zibandakanya ingxelo ebanzi esemgangathweni ecacisa ukucaciswa kweebhodi kunye necandelo lomnqamlezo ukuba kuyafuneka oko kubonisa ubunzulu bendawo yokwaleka komngxunya wokugqobhoza umngxunya kunye nonyango lomphezulu.
IPandawill ikwabonelela ngemibala eyahlukeneyo yemibala yemaski kunye nokugqitywa (i-gloss okanye i-matte) ukuze ihambelane neemfuno zakho zoyilo. Ngelixa uninzi lwee-PCBs zenziwe kumgangatho oluhlaza kumzi mveliso, sikwanikezela ngombala obomvu, oluhlaza okwesibhakabhaka, omthubi, ocacileyo kunye nokuqaqamba okumhlophe nokumnyama okusetyenziswa kakhulu ekwenziweni kwezicelo zokukhanyisa ezisekwe kwi-LED ukubonisa okanye ukucinezela ukukhanya kwepheripheral. Yonke le mibala ingasentla ibonelelwa ngaphandle kwepremiyamu yeendleko kwaye ii-inki ezisetyenzisiweyo zibekwe emgangathweni ukubonelela amanqanaba aphezulu okukhawuleza kombala kunye nokumelana nokuphela kunye / okanye ukutshintsha kombala xa kusenziwa.